Kusarudza Hurumende Kupinza kana Kuumba iyo LLC
The mamiriro akanakisa ekuisa mune zvese zvinoenderana nebhizinesi rako, zvinangwa, nzvimbo inodiwa, mutero uye zvakavanzika zvinodiwa. Pane zvakanakira kuisa muNevada, pamwe neDelaware, zvisinei, kana iwe uchibatanidza uye uchizoitisa bhizimusi kunyanya mune imwechete nyika, kana nyika yako yepamba, ipapo ingangodaro nyika ine musoro kupinza mukati, yako. Kana iwe uchitsvaga akakwira mwero yekuvanzika kana zvakanakira zvine chekuita nemutero, unogona kufunga kuisa bhizinesi rako kunze kwenzvimbo yekumba kwako. Tichafananidza zvakanakira kubatanidza mumatunhu akasiyana siyana.
Kusarudza iyo chaiyo mamiriro ekuisa rako bhizinesi mukati, inofanirwa kuve yako yekutanga sarudzo mushure mekusarudza bhizinesi mhando
Unofanira kutanga kuzvibvunza pachako kwaunenge uchiitisa ese kana ruzhinji rwebhizinesi rako. Mabhizinesi mazhinji madiki anozoisa pamwe nekushanda mudunhu mavanobata bhizinesi. Izvi zvinotevera kuita zvine musoro uye zvakapusa kuita sarudzo, zvisinei hazvo hazvibatanidzi mimwe yemimwe mibvunzo iwe yaunogona kuzvibvunza pachako kana uchifunga kuti ndeipi nyika inopa mamwe mabhenefiti. Funga nezvehunhu hwakavanzika, mutero mabhenefiti uye neruzhinji kutengeswa kukura kwekugona, kune kutanga.
Iwe unofanirwa kudzidza nezve zvakanakira nyika dzakasiyana usati waisa bhizinesi. Kana iwe uchironga kuisa kunze kwenzvimbo yako yekumba, kana nyika iyo iwe yauchabata ruzhinji rwebhizinesi rako, ungangodikanwa kuti ukwanise kuita sekunze sangano. Izvi zvinozivikanwawo sekunze kudzidza, zvichinyanya kunyoresa sebhizinesi rakabatanidzwa mune imwe nyika. Izvi zvinoda mamwe ekuwedzera mapepa uye maitiro.
Kuwedzera Kwekuwanda Kwekuvanzika
Nevada ine akati wandei ane simba anovanzika mabhenefiti ayo anoita kuti ive inonakidza nyika yekubatanidzwa kwebhizinesi. Pamwe nekuve isina-mutero nyika, Nevada inobvumidza vakasarudzwa maofficial nevatungamiriri kana iwe uchiisa rako bhizinesi. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kupedzisa gwaro kunyorera nehurumende uchishandisa vakasarudzwa vanosarudzwa maofficial uye madhairekita ane mazita anoenda pane yeruzhinji yakamisikidzwa zvinyorwa. Uku ndiko kuwedzera kwekuvanzika kwevaridzi nevatungamiriri vebhizinesi rakabatanidzwa. Mazita enhengo chaidzo dzemakambani anochengetwa kurekodha yeruzhinji. Kana kuvanzika kuri kunetsa kukuru, saka unogona kufunga nezvenzvimbo dzakanakisa dzekuisa muNevada. Ose maCorporation uye ma LLC anotenderwa kuve nevakadomwa pazvinyorwa zvekubatanidzwa kana kuumbwa.
Sangano reNevada rinogona kuita bhizinesi mune chero nyika nemamwe magwaro akareruka ekunyorera ayo anogona kuitwa neCompanies Incorporate. Nevada ine mamwe akasimba ematare edziviriro akadai sekuti kana kambani ikamhan'arirwa, maofficial, madhairekitori uye vagovani vane chengetedzo yakakura. Varidzi veyakachengeterwa yega Nevada mubatanidzwa vari vega uye havana kunyorwa muzvinyorwa zveruzhinji. Uyezve, hapana yemubhadharo wemubatanidzwa muNevada. Nekudaro, hapana mimwe mitero yekubhadhara kana mafomu emitero yemari yekufaira muNevada. Nevada LLC mutemo une zvimwe zvakakosha mabhenefiti ekudzivirira zvinhu zvakachengetwa mu LLC. Kana nhengo yeNevada LLC yakamhan'arwa kune zviripo zviri pamutemo zvekuti zvinhu zvakachengetwa mukambani zvinodzivirirwa pakubatwa.
Imwe sarudzo yepamusoro ndeye Wyoming LLC. Wyoming chengetedza midziyo yeiyo imwechete-nhengo LLC sezvinoita Nevada uye Delaware. Wyoming, zvakadaro iine yakaderera yegore rega mameseji kufaira mari yechero yevatatu. Saka, nekuda kwechikonzero ichocho, isu tiri kukurudzira Wyoming zvakanyanya uye nekuwedzera.
Kupindirwa mune reBhizinesi Rakanakira Nharaunda
Delaware yakagara iri imba yeimwe yakanaka kwazvo bhizinesi nharaunda inoshamisira yekuisa rako bhizinesi. Delaware ine iyo inonzi "Dare reChancery", inosanganisira vatongi vanoteerera chete emakambani emutemo nyaya. Uku kugona kunoitisa mitongo isingaenderane. Nekudaro, pane kurwa inodhura yepamutemo hondo, yapfuura nyaya dzakafanana dzinogona kuongororwa kuti zvinyatsovimbika kufanotaura mhedzisiro. Mazhinji makambani anotengeswa neruzhinji anosanganisirwa muDelaware, uye nekuda kweizvi pane chifananidzo chekuvimbika kuruzhinji chinogona kuwedzera mukana wekuti vatengesi vape mari kune yako yeruzhinji kana yakazvimirira kupa. Kana rako bhizinesi rehurongwa riine IPO mariri, iyo yakanakisa nyika yekuisa mukati inogona kuve Delaware kuitira kuti utore mukana weiyi mabhizinesi akanaka mabhenefiti.
Iwe une zvinhu zvakati wandei pakusarudza kuti bhizinesi rako rinofanira kuverengerwa kupi. Tora fungidziro idzi zvakanyanya uye upimise zvakanakira nechero rekuwedzera manejimendi kufambiswa kwemabasa kana zvinyorwa zvinodiwa. Unoda zvakavanzika zvakadii uye bhizinesi rako rine rakanyanya geographic kana unoshumira musika wepasi rose kana wepasi rose? Kufunga kunofanirawo kusanganisira mutemo wenyika, mamwe matunhu ane nhoroondo yekufarira makambani muhondo yepamutemo uye chifukidziro chemubatanidzwa mukana wakakura mumatambudziko aya. Ndokumbirawo kuti urambe uchifunga kuti iyo chaiyo mamiriro ekuisa mune zvese zvinoenderana newe, bhizinesi rako, zvaunoda uye mamiriro, izvo zvakashandira imwe, zvinogona kusashanda kwauri.